အအေးမိတုပ်ကွေးရောဂါတွေကို အမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားပေးမယ့်လျှို့ဝှက်ချက် - Hello Sayarwon
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး » ရာသီတုပ်ကွေး
ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲဖြစ်တဲ့အခါ အအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်တာက မဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ကိုရောက်လာတတ်တဲ့အရာပါ။ အအေးမိတာ တုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ်မှာ မအီမသာခံစားရတာတွေရှိနိုင်သလို နှာရည်တရွှဲရွှဲ၊ အသက်ရှူမရပြုမရနဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေလည်းပျက်၊ အိပ်ရေးပျက်လူပင်ပန်းဖြစ်ရပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အအေးမိဖျားနာတာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပဲအဖျားတာတိုအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ လူသိနည်းသေးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုအကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဆိုကြပါစို့။
အအေးမိတာနဲ့တုပ်ကွေးဖြစ်တာက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပါဘူး။ ရိုးရိုးလေးတွေးရင်တော့ ခန္ဓါကိုယ်မှာနေထိုင်မကောင်းတာချင်းက အတူတူပဲလို့ထင်စရာရှိပါတယ်။ လည်ချောင်းနာတာ၊ နှာခေါင်းပိတ်တာ၊နှာချေတာ၊ချောင်းဆိုးတာ၊ခေါင်းကိုက်တာလိုမျိုး လက္ခဏာတွေက အတူတူပဲဆိုပေမယ့် တုပ်ကွေးြဖစ်တဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေက အအေးမိတဲ့အခါခံစားရတာထက် ပိုပြင်းထန်ပြီးရောဂါတိုးတက်မှုနှုန်းကတော့မြန်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ အဖျားတက်တာ၊ ကြွက်သားတွေနာကျင်ကိုက်ခဲတာ၊ချွေးထွက်တာ၊ခြေကုန်လက်ပန်းကျတာ၊ချောင်းခြောက်ဆိုးတာနဲ့ နှာမွှန်တာတွေပိုလာနိုင်ပါတယ်။ အအေးမိတဲ့အခါ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်သေးပေမယ့် တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလို အိပ်ရာထဲက ထနိုင်ဖို့တောင်မလွယ်ကူပါဘူး။
နှာချေလိုက်တဲ့အခါ တုပ်ကွေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ က လေထဲမှာပြန့်နှံ့ပြီး အခြားသူတွေကိုကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တင်မကဘဲ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အခြားသူတွေကိုပါ ကူးစက်စေနိုင်တဲ့ အအေးမိ၊တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် လူသိနည်းသေးတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ အအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါမှာရေဓါတ်ပြည့်ဝအောင်နေရမယ်၊ အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားရမယ်၊ကောင်းကောင်းအနားယူမယ်၊ သူများတွေကို မကူးစက်အောင် နှာချေတဲ့အခါချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ကာကွယ်မယ်စာတွေက သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အဲဒါတွေကို အသေးစိတ်မပြောတော့ဘဲ အခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုက Nasal Spray (နှာခေါင်းဖြန်းဆေး) အသုံးပြုတဲ့နည်းပါ။
အအေးမိ၊တုပ်ကွေး နဲ့ nasal spray
Nasal spray သုံးတာရဲ့ ပထမဆုံးအားသာချက်ကတော့ အအေးမိတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့အခါ တစ်ခါတည်းပါလာတတ်တဲ့ နှာခေါင်းပိတ်တာ၊ နှာရည်ယိုတာနဲ့ အသက်ရှူမရဖြစ်နေတာတွေကို ချက်ချင်းသက်သာစေနိုင်တာပါ။ ဒီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Nasal spray က အအေးမိနဲ့ တုပ်ကွေးကိုဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို အပြီးသတ်အမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းက အဓိကပါဝင်တဲ့အတွက် အဖျားတာကို ချက်ချင်းဆိုသလို တိုစေနိုင်ပါတယ်။
nasal sprayတွေကအအေးမိဖျားနာတာနဲ့ နှာခေါင်းပိတ်တာတွေကိုသက်သာစေနိုင်သလို ဒီရောဂါတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့် အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးရောဂါကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေပြီး အဖျားတာကိုတိုစေနိုင်တာပါ။ ဒါကတော့ အအေးမိတုပ်ကွေးဖျားနာတာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဖျားသက်သာစေဖို့ nasal spray အသုံးပြုချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုအသုံးပြုရမှန်းမသိတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးပြုနည်းလေးလည်းတစ်ပါတည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုလင်းကိုအရင်လှုပ်ပြီး အဖုံးဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဆေးပုလင်းမှာပါတဲ့ အညွှန်းအတိုင်း အသုံးပြုပေးပါ။
နှာခေါင်းထဲကို ဆေးမဖြန်းခင်မှာ နှာခေါင်းပေါက်တစ်ဖက်ကို လက်မလေးနဲ့ ဖွဖွလေးဖိထားပေးရပါမယ်။
နှာခေါင်းကလေကိုရှုထုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း နှာခေါင်းထဲဆေးတွေထွက်လာတဲ့အထိ ခပ်ပြင်းပြင်းညှစ်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ သတိရပါ။
အခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေအတိုင်း nasal sprayလေးကို နည်းစနစ်မှန်မှန် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အအေးမိ၊တုပ်ကွေးရောဂါပိုးတွေကို အမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်နိုင်ပြီး ခဏခဏဖျားတာမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
Minimalism က စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူဖြစ်စေလဲ။
ရုပ်ဝတ္ထုတွေ ပိုမိုတိုးတက်လာပြီး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အသစ်အဆန်းတွေ ထွက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ရိုးရှင်းစွာ နေထိုင်တတ်တဲ့ Minimalism ဆိုတာခေတ်စားလာပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ဖိစီးမှုဖြေလျှော့ခြင်း စက်တင်ဘာ 24, 2021 .2mins read
ကလေးတွေက အပြစ်တွေ့ရင်သာ ဆူခံရတာ၊ ကောင်းတာလုပ်ရင် ချီးကျူး ခံရတာ ရှားပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်က ရောင့်တက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကြောင့်ပါ။ ဒါတကယ်ပဲလား။
ကျောင်းနေအရွယ်, ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရဲ့ ကြီးထွားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှု, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စက်တင်ဘာ 24, 2021 .2mins read
ဘေဘီလေးက သရက်သီး စားလို့ရလား.......... ဆိုတော့ အဖြေကို သေသေချာချာလေး ဖြေပေးထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် ဆောင်းပါးလေးထဲ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်, ကလေးငယ်အာဟာရ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း စက်တင်ဘာ 24, 2021 .2mins read
ဝတ်အိပ်မလား...... ချွတ်အိပ်မလား....... ဘရာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ လေဒီလေးတို့ရေ................
အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး, အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာများ စက်တင်ဘာ 24, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 27, 2021 .3mins read